Nhau - Iyo iri kusimukira tsika yekudhinda indasitiri
Iyo tarisiro yekusimudzira yeChina yekudhinda indasitiri mumakore mashanu anotevera inofanotaura shanduko yemamiriro ehupfumi eChina, kugadziriswa kwemaindasitiri, kuderera kwenzvimbo yekudhinda indasitiri, mangani ekudhinda nekurongedza zvirimwa zvinoda kugadzirisa dambudziko rekusvetuka kubva dambudziko. Uye iyo yekudhinda indasitiri mune ramangwana ichave yerudzii rwekusimudzira gwara, kuratidza rudzii rwekuvandudza maitiro, zvakare kuve yakawanda yezvinetso zvehunyanzvi.
Izvo zvinonzi iyo indasitiri maitiro i "shanduko imwe mumakore mashanu". Mune mawonero angu, iko kusimudzira kwemaitiro makuru ekurongedza uye ekudhinda makambani kusvika parizvino anogona kufanotaura tarisiro yemusika wekutungamira kwekutungamira kweChina kudhinda nekuisa mafekitori mumakore anotevera mashanu.
Iko kusanganisa kwekudhinda nekurongedza zvirimwa hakudzivisike
Dzazvino nhau data data ongororo: Mutengo wemakambani eChinese uri kukwira, asi mushambadziro wekutengesa musika wakawira kune wakaderera kwazvo munhoroondo.
Sezvineiwo, indasitiri yekudhinda haigone kudzivirira mamiriro ese ezvinhu uye inotambura nemamiriro akafanana. Mari yehupfumi hwevanhu iri kukwira, mutengo wekubhadhara wezvitoro kana mafekitori hausi kungokwira chete, asi purofiti yekurongedza nekudhinda iri mukuderera kwakanyanya.
Nekuda kwekushomeka kwemakwikwi, mamwe makambani anorwisa kukwikwidza kwemitengo kuti varambe vachirarama mumusika wekutengesa. Makambani mazhinji madiki nepakati-epakati-ekudhinda makambani ari kuvhara zvitoro zvavo uye vachibva pamusika wekutengesa pakati pekukwira mari uye kudzikira purofiti.
Asi kana kunzvenga kana kuomesa kurwa ndiyo yekupedzisira mhinduro Nekuvandudza nekushandurwa kwepakeji uye yekudhinda indasitiri yekugadzira, pachave nenhamba hombe yezvidiki uye zviri pakati nepakati kudhinda uye kurongedza zvirimwa kusangana kusangana kweese ari maviri mugwagwa.
Kunatsiridzwa kwemachini nemidziyo kwave kuita kusingadzivisike
Zvakadiniko nemutengo unokwira wehupfumi hwevanhu? Kana iwe usiri kuda kupinza yakakwira mari yebasa, iwe uchafanirwa kuwedzera kugadzirwa.
Uye kiyi ndeyekuvandudza michina yekambani, zvine mwero kusimudzira michina nemidziyo uye tekinoroji, uye kutsiva hupfumi hwevanhu neinokodzera capital jekiseni inongedzo yeramangwana.
Nei zvakachipa kuisa mari mumachini nemidziyo zvinehunyanzvi pane musimba?
Sezvo China iri mukuderera kwezvehupfumi padanho razvino, mutengo wemusika wemuchina nemidziyo zvakadzikira. Kutsiva basa nemichina nemidziyo kusimudzira kwenguva pfupi mukugadziriswa kwemidziyo. Nekudaro, nekuda kwekuenderera kwekuita kwemachina nemidziyo, kugona kukuru kunozowanikwa.
Panguva imwecheteyo, nguva dzakasiyana dzekutengesa musika dzine dzakasiyana kurongedza kudhinda mirau, pepa rekudhinda, kugadzirisa tekinoroji shanduko, kugadzirisa michina nemidziyo zvinogona kusangana nemusika wekutengesa nekukurumidza sezvazvinogona.
Batanidza kukosha kukuru kune vatengi kurongedza uye kudhinda ruzivo
Unonzwisisa here? Izwi rekuti "rakagadziriswa" rakadzika midzi mumoyo yevatengi, yakarongedzwa kurongedza uye kudhinda zvakanyanya zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vemazuva ano.
Nekuvandudzwa kweInternet uye nekuvandudzwa kwemitemo yakakwenenzverwa, huwandu hukuru hwekupakata uye kudhinda zvakadzikiswa zvishoma nezvishoma Kuti uratidze zvakasarudzika, vatengi vazhinji vanodisa kugadzirisa zvinhu zvinoenderana ivo pachavo, ivo vari mune yakakura yedhijitari. kurongedza kudhinda zvinhu, chinhu chakadhindwa chinogona kuve chakasiyana zvachose kubva kumunhu kuenda kumunhu, zvichiita nyaya yemusiyano uye kuita kwevanhu.
Naizvozvo, makambani anofanirwa kuedza nepavanogona napo kupa vatengi ruzivo rwezviitiko zvichienderana nehunhu hwavo uye izvo chaizvo zvavanoda.
Yetsika + hombe kudhinda ka digital kudhinda inova nzira nyowani
Mhedzisiro yeshanduko yepasirese yekusimudzira inoratidza kuti parizvino, 85% yemakambani ekushambadzira ekushambadzira epasirese anogona kupa makuru e digital kudhinda ekupurinda masevhisi, mune iyo 31% yemakambani ekushambadzira ekushambadzira makambani akataura kuti anopfuura 25% mari hombe yebhizimusi kubva kudhinda hombe yedhijitari yekudhinda.Uyu mushumo "wakashama" kuzivisa munhu wese kuti musika wekutengesa wemitemo mikuru yekupurinda yedhijitari iri kuramba ichivandudza.
Kazhinji, padanho razvino, hombe kudhinda kwedhizaina kudhinda muChina inongoverengera 1%, asi nekuvandudzwa kwekutsvaga kwekuziva kwakasarudzika kwakakwana uye nekuvandudza kwemitemo yekuchengetedza zvakatipoteredza, kugadzirwa nekugadzira mitengo yemabhizinesi echinyakare ekudhinda ari Kukwira, uye nekudaro kudhinda kwakakura kwedhijitari kudhinda kuri kuvandudzika kubva kune tekinoroji zuva nezuva.Munguva inotevera yenguva, hombe kudhinda kwedhizaina kudhinda ichaunzwa muhuwandu hwakawanda hwenzvimbo dzakasiyana dzekudhinda, uye makambani ekudhinda ekupakata achasarudzawo hombe huwandu hwechinyakare kurongedza kudhinda kuwedzera dhijitari yekupurinda kudhinda, kuzadzisa izvo zvinoshanduka zvinodiwa pamusika wekutengesa
Rega Internet tekinoroji ipindire mukushanda uye manejimendi
Iyo e-commerce indasitiri ine nzwisiso yakanaka yeinternet tekinoroji.Mumakore achangopfuura, kuwedzera kune isipo panyama zvitoro, kudhinda nekupakata mafekitori zvakare anokwikwidza kuvhura online zvitoro zvinoenderana nee-commerce kuwedzera nzvimbo yekutengesa yemusika. Panyaya yezvinhu zvakagadzirwa, kugadziriswa kwehukama hwevatengi uye purofiti yekambani, vanogara vachivimba nedata rekuongorora, kuti vaite shanduko dzakatsiga pane shanduko.
Mune mawonero angu, maitiro ekusimudzira aya anongowedzera kwete kudzikira mumakore mashanu anotevera. Huwandu hukuru hwemafekitori ekudhinda nekurongedza anoendesa bhizinesi ravo rekudhinda online. Zvichakadaro, ivo vanozoshandisa hombe dhata kuti vaongorore data uye kusimudzira uye kushambadzira yavo yega zvigadzirwa nemafungiro evatengesi.
Naizvozvo, kutora zviwanikwa zvepamhepo uye kugonesa nzira dzepamhepo chiito chakakosha kumakambani ekupakata uye ekudhinda kutsvaga gwara rekuvandudza mumakore mashanu anotevera.
Mumapurasitiki epurasitiki anochinjika, anowanzo shandiswa aruminiyamu yakanamirwa pamifananidzo firimu yakakamurwa kuita zvikamu zviviri, CPP aruminiyamu yakanamirwa pamifananidzo, PET aruminiyamu yakanamirwa pamifananidzo, asi nekuda kwealuminium yakanamirwa pamifananidzo firimu inoumbwa iri nyore kuoneka aruminiyamu yakanamirwa nekuchinjisa chinoitika, izvo zvinounza kurasikirwa kukuru kune akawanda mabhizinesi ekupakata. , bepa iri, kubva pakasungwa bhainda, isa kumberi mhinduro dzakasiyana dzekudzivirira aluminium yakanamirwa pamifananidzo kufambisa firimu.
1. Maviri-echinhu polyurethane inonamira
1) Inonamira yakakosha yealuminium yakanamirwa pamifananidzo firimu inogamuchirwa
Yakashata yakajairika yekunamatira solvent kuburitswa uye kunamatira kuri nyore kuzadza aluminized layer, inokanganisa kusimba kweakavhenekerwa nhete, chinoumbwa chakaomeswa kana mhedzisiro yacho yakaipa, solvent masara akakurisa kwazvo, mushure mekurapa simba rekunamatira richaderera, kunyangwe aluminized kuchinjirwa kunoitika, saka unofanirwa kusarudza akakodzera mamorekuru uremu, akanaka solvent kuburitswa, akapfeka yunifomu akafukidzwa aruminiyamu yakanamirwa pamifananidzo firimu yepamusoro viscous simba haisi yakakosha yekunamatira
2) Huwandu hwakakwana hweglue hwakaiswa
Huwandu hweglue hwakakura, nyore kukonzera kuomesa mhedzisiro haina kunaka, kuitira kuti iyo yekunamatira inopinda kune iyo aruminiyamu kupfeka, uye zvakare inowedzera iyo yekurapa nguva, zviri nyore kuitika aruminiyamu yekumhanyisa kuchinjisa chinoshamisa, saka huwandu hweglue hunofanira kudzorwa munzvimbo yakaringana, zvinoenderana neruzivo rwehuwandu hwekutonga mu 2 ~ 2.5g.
3) Kuderedzwa kwekurapa mumiririri
Natsa hunyoro hweiyo yekunamatira dura, asi zvakare zvinobudirira kudzivirira kuendesa kwealuminium kupfeka, inowanzo shandiswa kudzikisa huwandu hweanorapa mumiririri, iyi mamiriro anogona kungoshandiswa chete muchiedza kuputira uye kubvisa simba zvinodiwa zvezvigadzirwa, polyester aluminium zvigadzirwa kusvika zvino sezvinobvira kusashandisa nzira iyi.
4) Kuvandudza kuomesa tembiricha uye nemhepo kumhanya yekuoma nzira
Mune iyo aluminized firimu remubatanidzwa yekugadzirisa maitiro, inofanirwa nenzira kwayo kugadzirisa yekuomesa tembiricha yekuoma nzira, semuenzaniso, kuwedzera 5-10 madhigirii, uye kuona mhepo inomhanya mumamita mashanu / s pamusoro, ita iyo solvent volatilized zvakanyanya kunyatsoita, kudzikisira iyo solvent zvisaririra, mukuwedzera zvinogona zvakare kushandisa yakakwira mambure mutsetse, yakakwira yevasungwa kupfeka inogona zvakare.
5) Wedzera kupisa kunopisa uye kupfupisa kurapa nguva
Aluminized firimu rinoumbwa zvigadzirwa mukurapa maitiro zvinofanirwa kunge zvakafanira kugadzirisa kupisa kunorapa, kupfupisa nguva yekurapa, kuitira kuti kunamatira kudzikise kupindirwa kwealuminium kupfeka kukuvara, zvinobudirira kudzivirira kuchinjiswa kwealuminium kupfeka, general control tembiricha 50-60 madhigirii , nguva mumaawa makumi maviri nemana kana zvakadaro, dzivisa nguva refu kurapwa.
6) Shandisa yakanaka mhando aluminium yakanamirwa pamifananidzo firimu
Kana mari ichibvumidza, tenga yemhando yepamusoro aluminized firimu, senge ine base base.
1) yeakareruka chigadzirwa kurongedza, senge chikafu chakazvitutumadza, mao noodles uye kumwe kugadzirwa, izvo zvinoshandiswa zveCPP aruminiyamu yakanamirwa pamoto, zvakanyanya kuitira kudzora mutengo wekugadzira, yakawanda inoshandiswa kune imwechete chinhu chinonamira mvura, mune maitiro ekugadzira mazhinji makore, amuka chete dambudziko reinki kuchinjisa, uye aluminized kuendesa, panguva imwechete nekuyedza chaiko, mushure mekusanganiswa kwesimba peel inogona kuwanikwa mukati me1 ON / inopfuura 15 mm, inogona kusangana nemhando yerudzi urwu rwekupakata zvigadzirwa.
2) Shandisa mvura-inonamira kunamatira kugadzira aluminized zvigadzirwa, iyo aniline roller inoshandisa mitsara inokwana mazana maviri, huwandu hweglue hunodzorwa mu1.2 ~ 1.8 gramu, kuve nechokwadi cheyunifomu huwandu hwekupfekedza, yakanaka yekuomesa mhedzisiro, iyo isingori chete inoderedza zvigadzirwa. mutengo kune imwe nhanho, asi zvakare nekugadzirisa chinetso cheyakagadziriswa masara, kuve nechokwadi cheyakajairika kugadzirwa kwevatengi.Deredza kunonoka kana iyo solvent yakasara yakawandisa yakashata mhedzisiro.Panguva imwecheteyo yezvizere machena zvigadzirwa zveingi, mhedzisiro yacho inonyanya kukosha .